» दमदार आवाज, जसले चारैजना कोचलाई आफुतर्फ फर्काए, भाग ६ (भिडियो)
दमदार आवाज, जसले चारैजना कोचलाई आफुतर्फ फर्काए, भाग ६ (भिडियो)
६ आश्विन २०७६, सोमबार १४:३७
चन्द्र घलान, ६ असोज । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा सबै ब्लाईन्ड अडिसनहरु सकिएका छन् । ब्लाईन्ड अडिसनबाट चारै जना कोचले १६–१६ जनाको ड्रिम टिम तयार पारेका छन् । ब्लाईन्ड अडिसनको १२ वटा एपिसोड सकिएसँगै अब ब्याटल राउण्ड सुरु हुनेछ । ब्लाईन्ड अडिसनबाट ६४ जना सहभागीहरुले ब्याटलका लागि आफुलाई योग्य ठहराएका छन् । जसमध्ये २१ जना सहभागीहरुले चारै जना कोचलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल भएका छन् । साथै ब्लाईन्ड अडिसनमा सहभागी भएका १९ जनाको अगाडि बढ्ने सपना सकिएको छ ।
यस भिडियो सिरिजको पाँचौँ भागसम्म हामीले चारै जना कोचहरुलाई फर्काउन सफल १९ जना प्रतिभाहरुका बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ । यदि तपाईले उक्त भिडियोहरु हेर्नुभएको छैन भने यस भिडियोको डिस्क्रीप्सनमा लिंक राखिएको छ । यस भिडियो सामग्रीको छैटौँ तथा अन्तिम भागमा हामी चारै जना कोचलाई फर्काउन सफल अन्तिम २ प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । हेरौँ पुरा भिडियो–
अञ्जु राना मगर, चितवन–सानैदेखि गीत गाउन थालेकी अञ्जुले छोरी भएकै कारण केही समय सँगीतलाई स्थगित गरिन् । २ वर्षसम्म उनले गीत गाउन छाडिन् । तर समाजले के भन्छ भन्ने कुरालाई पछि छाड्दै उनी गीत गाउन अगाडि बढिन् । उनी चर्चित ब्याण्डमा समेत आवद्ध छिन् । ब्लाईन्ड अडिसनमा उनले ‘नछोड्नु’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको आवाज सुनेर चारै जना कोच फर्किएका थिए । उनी कोच राजु लामाको टिममा छिन् । आदरणीय दर्शकबिन्द तपाईको विचारमा यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसले फाईनलसम्मको यात्रा तय गर्ला ? तपाईलाई कसको आवाज सबैभन्दा बढी मन पर्छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । साथै भ्वाईस अफ नेपालको गसिपका लागि हाम्रा अन्य भिडियोहरु पनि हेर्न सक्नुहुनेछ । भिडियो राम्रो लागेमा लाईक र यस च्यानललाई सब्स्क्राईब गरेर सहयोग गरिदिनुहोला ।
दमदार आवाज, जसले चारै जना कोच फर्काए Part 5
हेटौँडाबाट ‘बोका मास्टर–२’ रिलिज (भिडियो सहित)
ओपेरा इन्फोटेन्मेन्ट सिने प्रालिले कमेडी भिडियो ‘बोका मास्टर–२’ सार्वजनिक गरेको छ । ओपेराले आफ्नो आधिकारिक युट्युब च्यानल मार्फत कमेडी सिरिज ‘बोका मास्टर’ को दोस्रो भाग सार्वजनिक गरेको हो । यस अघि नै ‘बोका मास्टर’ को पहिलो भाग रिलिज गरिएको थियो । जसलाई दर्शकहरुले मन पराएका थिए । शिक्षा क्षेत्रमा केही शिक्षकहरुको आनीबानी र विद्यार्थीहरुको चतुर्याईका बारेमा कमेडी भिडियो केन्द्रित छ । ओपेरा टिमले तयार पारेको भिडियोमा रायु घले, बि एन धिताल, दिपक सापकोटा, सागर राई, रिकिता क्षेत्री लगायतका कलाकारहरुले अभिनय गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने ६ जना प्रहरी निलम्बित
बागमती गाउँपालिकाको लिलावनमा महिलाको शव फेला
यस्तो बन्यो सागर आले मगरको ‘सम्झना’
सज्जालाई सर्वाधिक अवार्ड